Ikamu lasehlobo eCanada - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Phila ihlobo elihle kakhulu empilweni yakho
I-FLAP SUMMERFunda, Hlola, Thola nokukhula
12 ukuze 17
Uhlelo lwethu lonke oluhlanganisiwe lunikeza isipiliyoni esiyingqayizivele, ukukuvumela ukuthi uthuthukise amakhono akho olimi ngesiNgisi noma ngesiFulentshi.
Izinhlelo zasekamu ze-BLI FLAP zinikeza umuzwa omuhle phesheya ohlanganisa ukufundwa kwesiNgisi nesiFulentshi ngezinto ezahlukahlukene ezijabulisayo endaweni ephephile nenakekelayo.
Umgomo wethu ungaphezu kokufundisa isiNgisi nesiFulentshi. Sihlose ukunikeza abafundi bethu ithuba lokukhulisa ama-horizons abo ngokwenza abangane abasha emhlabeni wonke.
Ubude nezinsuku zokuqala
I-2 kumaviki angu-8
Amaviki ama-2: 26/June – 10/July – 24/July – 07/July to 20/August
Amaviki ama-3: 26/Juni – 10/Julayi – 24/Julayi kuya ku-13/Agasti
Amaviki ama-4: 26/Juni – 10/Julayi – 24/Julayi kuya ku-20/Agasti
Amaviki ama-5: 26/Juni - 10/Julayi kuya ku-13/Agasti
Amaviki ama-6: 26/Juni - 10/Julayi kuya ku-20/Agasti
Amaviki angu-7: 26/June kuya ku-13/August
Amaviki angu-8: 26/June kuya ku-20/August
Izifundo zenzelwe ukugxila emakhonweni okuxhumana nokwakha ukuzethemba. Abafundi banikezwa amathuba amaningi okukhuluma ekilasini ukuze bathuthukise ikhono labo ngokwenza imisebenzi eminingi yokufunda ethokozisayo.
Amakilasi aphelezelwa ngama-workshops. Bakhuthaza ukuzimela kolimi nokuvumelana nezimo. Ngokusebenzisana bodwa nabaholi babo be-workshop, abafundi bazonikezwa iphrojekthi ezoqedwa isonto ngalinye futhi yethulwe ngoLwesihlanu.
Njalo ngesonto sinikeza imihlangano yokucobelelana ngolwazi ehlukene, efana:
Improv / Ukwenza
Abafundi bathatha Izifundo ezingama-25 zesiNgisi noma zaseFrance othisha abafanelekayo.
Imisebenzi yansuku zonke
Imisebenzi yansuku zonke ihlelwa ngendlela yokuthi abafundi bahlale benento ethokozisayo abangayenza.
Isampula Yemisebenzi Yansuku zonke
Uhambo oludala lokuhamba lwaseMontreal
Kwisampula Yezinto Zokusebenza
Umqhudelwano we-Ping pong
Sinikeza abafundi ithuba lokuthola umhlaba omusha ngezindlela ezintsha, bathola izinto ezintsha, benze abangane abasha futhi bazijwayeze amakhono abo amasha esiNgisi / nesiFulentshi ngaphandle kweklasi. Uhlelo luhlanganisa ukuvakasha ngempelasonto okugcwele noma imisebenzi emi-2 yezinsuku ezigcwele ngempelasonto.
Ngempelasonto abafundi bathola izindawo, njengoku:
Isampula Lohambo Lwangempelasonto (ishejuli iyahluka):
I-Ottawa (1 Usuku)
IQuebec City (1 Usuku)
I-Magic Canada Tour (izinsuku ezi-2)
I-Toronto, i-Niagara Falls (izinsuku ezi-2 noma ezi-3)
I-Arbraska Adventure Forest
I-LaRonde Amusement Park
Izinketho zokuhlala nezokuhlala ekhaya ziyatholakala.
Ohlelweni lwethu lokuhlala, amakamu azohlala e-EVO, indawo yokuhlala yabafundi etholakala imizuzu emi-5 ukusuka kwikhampasi yethu eyinhloko.
Amakamela azokwazi ukuthola ukwesekwa nokubhekwa okuhlinzekwa ngabasebenzi abanomusa abazobe bekuthola lapho bahlala khona.
Amakamelo aphindwe kamoya anomoya omabili
Isimo sokuzivocavoca kwezobuciko esivulekile 24/7
Echibini elivuthayo elingaphakathi endlini
Igumbi lokuhlanza · $ $
Igumbi lama-Movie neMidlalo
Ukuphepha kwe-24 / 7
Uhlelo lwethu lwasekhaya luzonikeza abahleli bamakamu ithuba lokuzibandakanya namasiko nezilimi zaseCanada. Bazophila isipiliyoni somndeni. Yonke imindeni yethu ibamba ngokukhethwa ngokucophelela futhi kufanele ihlangabezane nenqubo yekhwalithi ye-BLI. Siqinisekisa ukuthi wonke amakhaya asekhaya ahlangabezana nezindinganiso zokuphepha nezenhlanzeko futhi enza inqubo ekhethiwe yokuqokwa.
Uma abantu abasebenza emakamu bethatha uhlelo lwethu lokuhlala ekhaya, bazoqeda usuku lwabo ngehora lesithupha ntambama bese belibangisa ekhaya ukuyodla isidlo sakusihlwa nomndeni wabo obabambile, ngokuhamba komphakathi.
Zonke izidlo zizonikezwa ngumndeni. Ngesikhathi sohambo lwangempelasonto, amakamu azoba nesibopho sokuthenga ukudla kwawo.
Abafundi banikezwa ukudla oku-3 okunempilo ngosuku.
Ukugada, ukuphepha, nokuvikeleka
Indawo yokufunda ephephile
Izifundo ze-24 zesiNgisi noma zesiFulentshi ngesonto • NgoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu, ezinikezwa othisha abaqeqeshiwe
Izinto zokwenza izifundo kanye nezitifiketi zokufeza
Amaqembu amancane anenani eliphezulu labafundi be-18 ekilasini ngalinye
Imali yokubeka indawo yokuhlala
Indawo yokuhlala · Izakhiwo zokuhlala kanye nezokuhlala kwamakhaya ezikhona ngokuya endaweni ekhethiwe
Uhlelo oluphelele lokudla ibhodi oluhlanganisa ukudla kwe-3 ngosuku, ngezinketho ezihlukahlukene zokunomsoco nokuphilile
Imisebenzi egadiwe ngokugcwele kanye nokuvakasha - imisebenzi emihlanganweni emi-5 yengxenye yosuku phakathi nesonto nezinsuku ezi-2 ezigcwele ngoMgqibelo nangeSonto
Izindleko zokuthutha zendawo
Isikhumulo sezindiza thatha bese ushiya phansi
Insizakalo encane engenzile · Abasebenzi be-BLI banxusa abafundi abancane ukuya esikhumulweni sezindiza ukuqinisekisa ukuhamba okuphephile